Hjem > Uncategorized @so > Soo bandhiga HivNorges
Soo bandhiga HivNorges
HivNorge malaha baxnaanin wadahadal oo loogu talagalay qof kasta oo qaba HIV-ka ama uu saameeyo HIV-ku, ama isticmaala daawada PrEP. Iyadoo lala kaashanayo lalana shaqaynayo ururka Chemfriendly, waxaan sidoo kale u fidinaa dalab wadahadal ah dadka isticmaala (chemsexbrukere) iyo kuwa kale ee leexsan/gayda ah ee daroogada isticmaala. Haddii aan isla qiimeyno in aan u baahan nahay turjubaan, waan diyaarin doonnaa.
Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa waxqabadyo badan oo loogu talagalay dadka la nool HIV-ka ama ay saameysay, kuwa isticmaala daawada PrEP iyo kuwa kale ee daneynaya. Raac jadwalkayaga iyo fursadaha aan bixino iyo waxqabadyadayada.
Haddii aad rabto inaad la hadasho qof kale oo la nool cudurka HIV-ka, waxaan leenahay dad xaaladadaada oo kale ku jira oo badan oo ku faraxsan wada sheekaysiga. Kuweena kale xaaladaas ku sugan waxay kaloo ku hadlaan luqado kala duwan.
HivNorge waxaa laga heli karaa taleefanka nambarkiisu yahay 21314580, ama emayl ama waxaa loo soo marin karaa bayjka.Facebook.